Ngesandla Esiqinile PCB - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax - Gxila Ekubunjweni Kwebhodi Yesekethe Ephrintiwe kanye Nezinsizakalo ze-PCB Assembly Turnkey, Ikhwalithi ephezulu, Izindleko eziphansi, Ukulethwa Ngokushesha noku-oda okulula kwamakhasimende emhlabeni wonke.
Ububanzi bomkhiqizo we-PCB eqinile i-Fumax enganikela ngayo：
* Ama-PCB anezendlalelo ezingafika kuma-48
* Umgogodla we-Alu, nama-plate-through
* I-Laser Direct Imaging (LDI)
* Ama-Microvias kusuka ku-75µm
* Blind- futhi wangcwatshwa-Vias
* Nge-Plugging / Stacking
* Ungqimba （2-40 izingqimba） ；
* Usayizi PCB （Min. 10 * 15mm, uMax.508 * 889mm）
* Iqedile ukujiya kwebhodi （0.21-6.0mm） ；
* Min base zethusi ukujiya （1/3 OZ (12um)） ；
* UMax uqedile ukujiya kwethusi （6 OZ） ；
* Min trace ububanzi / isikhala layer ungqimba lwangaphakathi: Ingxenye 2 / 2mil, isiyonke 3 / 3mil; Isendlalelo sangaphandle: Ingxenye 2.5 / 2.5mil, isiyonke i-3 / 3mil） ；
* Ukubekezelelana kosayizi wobukhulu （± 0.1mm）;
* Surface Ukwelashwa （HASL / ENIG / OSP / HOLA HASL MAHHALA / GOLD PLATING / EMMERSION Ag / IMMERSION Sn ； ；
* I-Impedance Control Tolerance （± 10%, 50Ω nangaphansi: ± 5Ω） ；
* Umbala weSolder Mask （oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omhlophe, omnyama）.
Qina Amabhodi Esifunda Aphrintiwe unikele ngokuqina kwesekethe futhi kunganciphisa usayizi nesisindo jikelele sebhodi. Yingakho abaningi izinkampani zikagesi emhlabeni sebenzisa lawa mabhodi kumadivayisi amaningi kagesi kanye namagajethi. Usayizi ohlangene, ukungavikeleki ekuhambeni, kanye nokugcinwa okulula kwenza ama-PCB aqinile abe ngumkhiqizo ofanele wezicelo ezahlukahlukene. Ziwusizo ikakhulukazi ezimbonini lapho izingxenye zidinga ukulungiswa, futhi zidinga ukubhekana nengcindezi yohlelo lokusebenza, namazinga okushisa aphakeme.
* I-Industrial Electronics kanye ne-Automation: Ama-PCB aqinile angasetshenziswa ukuxhasa ukukhanya kanye nezicelo zomsebenzi osindayo. Ama-PCB ahlukahlukene angasetshenziswa ukuhlinzeka nge-impedance elawulwayo nokwakha ukuxhumana okungcwatshwe. Ama-PCB anomthwalo osindayo angasetshenziselwa ukuxhasa izinhlelo zokusebenza ezibandakanya amandla aphezulu nemvamisa. . Izibonelo zezinhlelo zokusebenza ezishintshayo zifaka amarobhothi, izilawuli zegesi nezingcindezi, imishini yokukhetha nokubeka, kanye nabacindezeli bokuqhuma
* Ezokwelapha: Ngenkathi amasekethe aguquguqukayo athandwa kakhulu kulo mkhakha, ama-PCB aqinile nawo anendawo ezinhlelweni zezokwelapha. Zisetshenziselwa ikakhulukazi imishini emikhulu, engaphatheki. Izibonelo zalokhu kufaka phakathi imishini ye-tomography, imishini ye-Electromyography (EMG), kanye nezinhlelo zeMagnetic Resonance Imaging (MRI).
* I-Aerospace: Imboni ye-aerospace iqukethe izindawo eziyinselele, zokushisa okuphezulu. Ama-PCB aqinile angasebenza kalula lapha, ngoba angakhiwa nge-substrates yethusi ne-aluminium, nama-laminates okushisa okuphezulu. Izibonelo zezicelo ze-aerospace zifaka ama-Auxiliary Power Units (APUs), insimbi yamabhanoyi endiza, izishintshi zamandla, izinzwa zokushisa, nezinhlelo zokulawula izinsimbi.
* Izithuthi: Ama-PCB aqinile angatholakala ezimotweni eziphakathi nendawo ukuya kwezikhulu. Njengezinhlelo zokusebenza ze-aerospace, ama-PCB angakhiwa ngezinsimbi zethusi eziphezulu ne-aluminium. Ama-laminate okushisa okuphezulu angangezwa ukuvikela ekushiseni kwenjini kanye nokungcola kwemvelo. Ama-PCB ezithuthi nawo angakhiwa ngethusi elifulethwe ukuze kube nokuqina okuthuthukile. Ama-PCB aqinile angasetshenziswa ezinhlelweni ezinjengeziguqululi zamandla ze-AC / DC, ama-Elektroniki Amakhompyutha (ama-ECU), izinzwa zokudlulisa, namabhokisi okuhlangana kwamandla.